Radanoara Julien : “Tokony hohamafisina ny fitakiana ireo Nosy malagasy” | NewsMada
Radanoara Julien : “Tokony hohamafisina ny fitakiana ireo Nosy malagasy”
“Efa nanomboka ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Efa tsara izay,nefa tokony hohamafisina. Tokony hanaovana tsy fanekena an’izany eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika frantsay. Homena dika ny fanambaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny malagasy ny praiminisitra sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny frantsay.” hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien.
Hetsehina koa ny Indian Ocean Rim Asssociation (Iora), manamorona ny ranomasimbe Indianina. Tokony hampahafantarina ihany koa ny zava-misy izy ireo: tsy manaiky ny hataon’ny fanjakana frantsay i Madagasikara, ary ny Iora no hanaparitaka izany.
Tsy tokony hoekena koa ny fidiran’ny Air France, nanapa-kevitra fa hanao sidina eran’i Afrika. Toy ny nataon’ny Sénégal hoe tsy firenena voazanaka intsony ka fanapahan-kevitry ny Frantsay samy irery ny fandefasana fiaramanidina any aminy. “Isika ihany no manapaka ny amin’izay satria ao anatin’ny fandrianam-pirenentsika”, hoy izy. Toy izany koa ny amin’ny fanokafana ny lycées sy ny collèges de france rehetra. Tokony tsy havela hisokatra izany satria ny sekoly malagasy aza, tsy misokatra. Ao anatin’ny fiandrianam-pirenena izany.
Hararaotina ny fisian’ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta. Tokony haka fehinkevitra koa izao ny depiote sy ny loholona amin’ny fanomezana anarana malagasy amin’izay ireo Nosy malagasy hoe Nosy Sambatra, Nosy Kely, Nosy Bedimaka, Nosy Ampela. Havoaka manerana an’izao tontolo izao izany.